Vhidhiyo Inokosha Statistics yeB2B Vatengesi | Martech Zone
Vhidhiyo Inokosha Statistics yeB2B Vatengesi
Ichi chingave chinonyanya kunakidza uye kunyatso kuenzanisa vhidhiyo infographic yandakatarisa pairi B2B Kushambadzira. Nepo zviverengero zvakanyorwa pamusoro pegore rapfuura, zvinopa mufananidzo wakajeka wekuti sei kutenga maitiro kwachinja mune bhizinesi kuita bhizinesi. Iyo zvakare inopa toni yeuchapupu hwekuti sei uye nei zvirimo uye zvemagariro zano zvakakosha mukutengesa kweB2B!
Matengero ari kuita mabhizinesi ari kuramba achiomarara, saka takabvunza mubvunzo: 'Aya ndiwo magumo ekurwira kunze?' Huye, yedu yekutevera-vhidhiyo yakarongedzwa mune ese echokwadi uye mateki evashambadzi kuvaka bhizinesi kesi kune yakaenzana inbound uye inobuda yekushambadzira zano. Iyo yaitoratidza madinosaurs. Earnest
Dingindira rakakosha muvhidhiyo iyi rakananga kumberi… zivisa zvaunotarisira, usatengese kwavari. Iko kugona kwekutengesa kuri nyore kwazvo kana yako tarisiro yakadzidziswa - kwete chete pane chako chigadzirwa - asi hunyanzvi hwako uye chiremera mukati meindasitiri.
Hezvino zvinotevera B2B Inokosha Statistics infographic:
Tags: mutengo wekuwanab2b inbound kushambadzirab2b kushambadzira nhareb2b kushambadzira kunobudaContent Marketingkutenga vatengidzoka pakudyarawhitepaper kuverengavarungu